Hoggaanka sare ee Midowga Yurub oo markii ugu horeysay haweeney loo dhiibay – Somali Mail
August 19, 2019 Click here - to select or create a menu
Home WARARKA Somali News Hoggaanka sare ee Midowga Yurub oo markii ugu horeysay haweeney loo dhiibay
Hoggaanka sare ee Midowga Yurub oo markii ugu horeysay haweeney loo dhiibay
SM Staff July 17, 2019
EU(SONNA) Codeyn qarsoodi ah oo ay sameeyeen guddiga Midowga Yurub ayaa madaxweynaha gudigaasi ugu doortay haweeneydii ugu horeysay ee xilkaasi qabata,taasi oo ah Ursula von der Leyen oo u dhalatay dalka Jarmalka.
Madaxweynaah cusub ee Guddiga Midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa Waxaa ay heshay 383 cod waxayana ubaahneed codad gaaraya 374 ka mid ah 747 xubnood ee codadka dhiibanayay ee xubnaha Baarlamaanka ee Midowaga Yurub oo doorashadaasi sameeyey,waxaana guddigu uu dejiyay Sharciyada,taasi oo horseedaysa in talaabo laga qaado wadamada xubnaah ka ah hadii ay qaladaad galaan.
Ursula von der Leyen ayaa u mahadcelisay Baarlamankii doortay iyadoo ku tilmaantay kalsoonida ay xubnahaasi siiyeen ay ka tarjumayso midnimada Midowga Yurub qeybaha Bariga Koonfurta Galbeedka iyo Waqooyiga Yurub.
Sidoo kale waxaa la filaya in bisha soo socota ee November la bedelo guddoomiyaha guddigaasi ee haatan talada haya Jean-Claude Juncker ,kaasi oo la hadal hayo in uu bedelo Wasiirka Gaashaandhiga Dalka Jarmalka.
Madaxweynaah cusub ee Midowga Yurub ee la doortay Mrs von der Leyen waxay ku dhalatay magaalada Brussels ee caasimadda Dalka Belgium, waxayna leedahay 7 caruura ,waxay ahayd haweeney dhaqtarad ah ka hor inta aysan ku soo biirin siyaasaddda, waxay balanqaaday in ay xooga saari doonto sidii loo heli lahaa daryeel bulsho guud.
Previous article Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka XFS oo Furay Shirka Dardar-gelinta Iyo Fulinta Qorshaha Dib-u-soo kabashada Iyo u Adkaysiga Aafooyinka
Next article Aqalka Wakiilada Maraykanka ayaa cod ku meel mariyay qaraar lagu ka dhan ah madaxweyne Trump
Wasiirka Beeraha Soomaaliya oo ka qayb galay Shir Caalamiya oo ka dhacay dalka Rwanda+sawirro
Shirkan oo ay martigalisay Dowladda Rwanda waxaa soo qaban-qaabiyay Bankiga Africa(AfDB), …